Wararka Maanta: Talaado, Dec 15, 2020-Kenya oo shaacisay in aysan ka aargudandoonin go'aankii Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay
Soomaaliya ayaa xiriirka ugu jartay Kenya, ka dib markii ay ku eedeeysay in ay xad gudubyo joogta u hayso madaxbannaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya toddobada maalmood ee soo socota ay diblomaasiyiinteeda oo dhan kala baxayso Kenya.
Afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna oo la hadlay warbaahinta gudaha dalkaas, ayaa sheegay in dowladda Kenya aysan raaci doonin isla wadadii ay Soomaaliya martay.
“Ma sameyn karno wax la mid ah wixii ay Soomaaliya sameysay. Haddii aan sidaa yeelno waxay umuuqataa aargudasho halkan, waxaan u oogolaan doonnaa IGAD iyo Comesa inay la wareegaan howshan, ”ayuu yiri Cyrus Oguna, afhayeenka dowladda Kenya.